Ecamm Live: Ga-enwerịrị sọftụwia ọ bụla maka iyi iyi ọ bụla | Martech Zone
Ekekọrịtala m otu m siri chịkọta nke m ụlọ ọrụ n'ihi na ndụ gụgharia na Podcasting. The post nwere ihe ọmụma zuru ezu na ngwaike m kpọkọtara… site na-eguzo oche, mic, mic arm, ngwa ọdịyo, wdg.
N’oge na-adịghị anya, ana m agwa ezigbo enyi m Jack Klemeyer, a gbaara John Maxwell Coach asambodo na Jack gwara m na m kwesịrị itinye Ecamm Ndụ na ngwanrọ ngwanrọ iji were ndu m na-egwu egwu. Akụrụngwa ahụ na-egbukepụ egbukepụ, na-enyere gị aka ịmepụta igwefoto igwefoto na sistemụ gị ebe ị nwere ike ịnwe ọtụtụ nkwalite maka nkwanye ndụ.
N'ime ọfịs m, enwere m ike ịgbanye ntinye ọdịyo, gbanwee igwefoto, gbanwee ndenye vidiyo m, gbakwunye kọmpụta ma ọ bụ windo, gbakwunye ihe mkpuchi ederede, dekọọ mpaghara, ma ọ bụ ọbụna bipụta ozugbo na Facebook, LinkedIn, Twitch, YouTube, Restream.io , na ndị ọzọ. Ọ bụ ikpo okwu siri ike nke ị na -enweghị ike ibi ma ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu ọdịyo na vidiyo.
Ecamm Live ngosi
Nke a bụ vidiyo nlele dị mma site na Ecamm Ndụ ụmụ nwoke…
Ecamm Live Atụmatụ Gụnyere
Ntinye igwefoto - Gbanwee ma gbanwee echiche na ogo HD site na iji igwefoto USB ọ bụla ejikọrọ, igwefoto laptọọpụ, DSLR, ma ọ bụ igwefoto na-enweghị atụ.
Ntinye vidiyo - Stream Blackmagic HDMI ngwaọrụ ijide, iPhone, na Mac ihuenyo ikesa.
Ntinye ọdịyo - Jiri igwe okwu ọ bụla ejikọtara iji nye ọdịyo.
Nkwado 4K - Dekọọ ma gbasaa na kristal doro anya 1440p na 4K.
Green Screen - Gbanwee nzụlite ha site na njirimara ngosipụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-mma.
Nkwụsị - gbakwunye ederede, ọnụ ọgụgụ, ihe ndị na-ekiri ihe, obere ụzọ n'ụzọ atọ, na eserese dịka akara ụlọ ọrụ na ntanetị gị.
Nleba anya n’ezie - Nyochaa mgbasa ozi gị na ngosipụta ejikọrọ.
Ebe Echekwara - ị nwere ike ide ihe nkiri tupu oge eruo, mezue na utu aha ihuenyo wee gbawaa ihu. Nke a abatawo m uru, ebe m nwere ike inwe ọnọdụ maka azụmaahịa m ọ bụla.
Ikesa ihuenyo - Livestream gị n'ihu, nkuzi, na demos na otu click. Họrọ ịkekọrịta ihuenyo gị niile, ma ọ bụ naanị otu ngwa ma ọ bụ windo. Tinye ndụ foto dị na foto gaa na agbasa ozi n'ikuku maka mmetụ onwe gị.
Mmekọrịta Skype - Mee ngbasa ihuenyo gbara nfe site na iji oku vidiyo Skype, ị ga-ahụkwa ka ndị ọbịa gị gosipụtara dị ka isi igwefoto na Ecamm Live.
Zuru - mwekota na Restream.io na Switchboard Live pụtara ndụ gụgharia n'ọtụtụ nyiwe n'otu oge dị mfe dịka otu ịpị. Site na nkwado nkwado maka mkpokọta nkata nke mkpokọta, Ecamm Live nwere ike igosipụta mkparịta ụka nkata site na nyiwe 20.
Kpọọ Video - Gbanwee faịlụ vidiyo maka mmeghe na ngalaba edere tupu edere ya.
Nke a bụ nlele desktọpụ m nwere ike niile:
Otu n’ime ihe dị m mkpa bụ Ecamm Live nwere njikwa dị egwu ka m nwee ike ịgbanwe ihe m Logitech BRIO igwefoto web mbugharị & pan, nchapụta, okpomọkụ, tint, saturation, na gamma nzacha.
Bido n'efu na Ecamm Live
Ngosi: Abụ m mmekọ Ecamm Ndụ na Amazon ma tinyere njikọ ndị a na post a!
Tags: igodo iyi omenalafacebook na-adị ndụFacebook ndụ gụghariaFacebook gụgharialinkedin gụgharialinkedin gụghariaebi ndụlogitech brioọkara n'ụzọ atọzuru ikerestream.iogụghariagụgharia softwareswitchboard ndụtuwichitwitch ndụ nkwanyenkwanye ugwuvideo gụghariavideo gụgharia softwareYouTube ndụ gụghariaYouTube gụgharia